Chelsea Oo Si Xor Ah Ku Doonaysa Xiddiga Bayern Munich Niklas Sule
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo si xor ah ku doonaysa xiddiga Bayern Munich Niklas Sule
October 7, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay isha ku heyso xaalada qandaraaska daafaca Bayern Munich Niklas Sule , kaasoo laga yaabo inuu ugu biiro si bilaash ah.
Sule ayaa hadda kala xaajoonaya kooxda reer Jarmal heshiis cusub, waxaana jiray dhibaatooyin markii laga shaqeynayay heshiiska 26 jirka.
Waxaa la wada og yahay in Chelsea ay suuqa ugu jirto daafac dhexe ka dib markii ay kooxdu isku dayday inay la soo wareegto Jules Kounde xagaagii oo dhan, laakiin heshiis lama gaarin .
Si kastaba ha ahaatee, Sport Witness ayaa sheegaysa in dhibaatooyinkii qandaraas ee Sule ee dhawaanahan ay kicisay xiisaha England, oo ay ku jirto kooxda heysata horyaalnimada Yurub ee Chelsea.
Thomas Tuchel ayaa la sheegay inuu taageere u yahay waana tababaraha Chelsea laftiisa oo kooxda ku riixaya inay isha ku hayso xaaladda, taasoo keeni karta inay suurtogal noqoto saxiix xor ah sababtoo ah heshiiska Sule oo ku eg xagaaga.
Iyadoo qandaraaska uu haatan Antonio Rudiger kula jiro Blues uu dhacayo xilli ciyaareedkan, waxaa jira warar badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa kooxda, iyadoo Munich ay xiiseyneyso adeegiisa, waxaana suurtogal ah inuu baxo inay kordhineyso rabitaanka Chelsea ee daafac.